Banky Radisson Hotel Group any Afrika: hotely 11 vaovao
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Banky Radisson Hotel Group any Afrika: hotely 11 vaovao
Radisson Hotel Group dia nanampy trano fandraisam-bahiny 11 tany Afrika tao anatin'ny sivy volana voalohany tamin'ny taona 2019, nampitombo ny fivelarana manerana ny kaontinanta. Izany dia mitondra ny portfolio an'ny Vondrona Afrikanina amin'ny trano fandraisam-bahiny efa ho 100 sy efitrano mihoatra ny 17,000 miasa ary eo an-dàlam-pandrosoana manerana ny firenena 32 afrikanina ary miorina amin'ny làlana mahatratra hatrany amin'ny trano fandraisam-bahiny 130 sy efitrano 23,000 amin'ny 2022.
Andrew McLachlan, filoha lefitra zokiolona, ​​fampandrosoana, Sub Sahara Africa, vondrona Hotely Radisson, hoy izy: "Herintaona tena natanjaka ho an'ny Radisson Hotel Group, kaontinanta tena inoanay tokoa. Tamin'ity taona ity dia nanao sonia fifanarahana trano fandraisam-bahiny vaovao izahay isaky ny 25 andro, ary mifanaraka amin'ny paikadim-pampandrosoana ifantohantsika izay misy ny fampidirana marika vaovao sy fitomboana miakatra amin'ny tanàna lehibe ahafahantsika mampivelatra sy miasa hotely maro ao anatin'io tanàna io ihany. Izany dia hiteraka synergie miasa sy tombony amin'ny vidiny ho an'ny trano fandraisam-bahiny tsirairay ao amin'ny tanàna iray ihany. Mifantoka amin'ny 23 amin'ireo tanàna 60 lehibe kokoa atsy Afrika isika izao ary manana rakitsoratra voaporofo rehefa mampitaha ny haben'ny portfolio-nay aty Afrika mandritra ny 19 taona niasa teto amin'ny kaontinanta. Mirehareha izahay fa ny mariky ny sahaninay, Radisson Blu, dia nahazo ny toerana voalohany ho marika hotely mitombo haingana indrindra ao Afrika, hoy ny W Hospitality Pipeline Report. ”
Tim Cordon, filoha lefitra zokiolona ao amin'ny faritra, Moyen Orient & Africa, Radisson Hotel Group, Hoy izy: "Miaraka amin'ny maodelim-pandraharahana vaovao, dia namaky firaketana izahay tamin'ny taona 2018 niaraka tamin'ny fiakaran'ny maridrefy GOP isaky ny tsena, na eo aza ny fihenan'ny taha. Amin'ity taona ity dia manohy manao an'izany isika amin'ireo dingana lehibe marobe nahatratrarana, toy ny fidiram-bolan'ny vondrona 14%, fiakarana 30% amin'ny vola miditra amin'ny Radisson Rewards Meetings, loka mihoatra ny 50 no azony ary 90% amin'ireo hotely Radisson any Afrika no miantoka ny fanamarinana Safehotels. Izahay dia nametraka manerantany voalohany amin'ny fiarovana sy fiarovana ny trano fandraisam-bahiny amin'ny alàlan'ny Radisson Blu Hotel & Conference Center Niamey hahazoana ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fanamarinana Safehotels, Executive, telo andro monja taorian'ny nisokafan'ny hotely tamin'ny Jona 2019. Nametraka famatsiam-bola mitohy amin'ny loharanon-karena ao Afrika izahay , mampitombo ny ekipa mpanohana ny hotely sy ny tompona anay. ”
Raha nilaza ny heviny momba ny drafi-pivoarana ao Afrika Atsinanana ny vondrona dia nilaza i McLachlan fa: "mifanaraka amin'ny drafitra fampandrosoana fivelomanay mandritra ny dimy taona, dia mitady ambaratonga any amin'ireo tanàna lehibe mihetsika izahay, toa an'i Addis Ababa, Nairobi, ary Kampala. Misy ny vintana lehibe any Etiopia noho ny isan'ny mponina sy ny fanamorana fidirana amin'ny fiaramanidina, miaraka amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka afrikanina, Ethiopian Airlines. Addis Ababa dia manana ny fahafaha-mampiantrano ny tsirairay amin'ireo marika fandraisam-bahiny miisa dimy eto Afrika. Ireo fahafaha-manao ireo dia tsy ho an'ny hotely fananganana vaovao ihany fa ho an'ny fanovana marika marika eo an-toerana ihany koa. Afrika Atsinanana dia manolotra tombontsoa manokana any anaty ala sy amoron-dranomasina. Mikaroka tetik'asa fizahantany ara-tontolo iainana izahay, mampiasa ny valan-javaboary any Oganda, Rwanda, ary Kenya. Mikasika ny vina amoron-dranomasina dia manadihady ireo vintana any Mombasa, Zanzibar, Dar es Salaam ary Diani izahay. ”
Hatramin'ity taona ity, Radisson Hotel Group dia nanokatra hotely roa any Afrika; Radisson Blu Hotel & Conference Center, Niamey - hotely marika iraisam-pirenena voalohany sy tokana misy kintana 5 eto amin'ny firenena ary koa ny laharam-pahamehana ho an'i Algeria tamin'ny alàlan'ny fisokafan'ny Radisson Blu Hotel, Algiers Hydra. Radisson Hotel Group dia kasaina hanokatra hotely roa hafa alohan'ny faran'ny taona, miaraka amin'ny fanokafana ny hotely fahatelony any Kenya, Radisson Blu Hotel & Residence Nairobi Arboretum amin'ny volana oktobra ary Radisson Blu Hotel Casablanca dia kasaina hisokatra amin'ny volana novambra, manamarika ny fidiran'ny vondrona voalohany ao amin'ny ny tanana.
Ho fanampin'ny portfolio misy hotely enina nosoniavina tany Egypt tamin'ny fiandohan'ity taona ity, ny tolotra hotely sisa dia misy:
Radisson RED Johannesburg Rosebank, Afrika Atsimo
Miorina amin'ny fahombiazan'ny marika hotely Radisson RED, vao nanambara ny fanaovan-tsonia ny hotely Radisson RED faharoany any Afrika Atsimo ny vondrona. Voalahatra hisokatra ny volana febroary 2021, ny Radisson RED Hotel Johannesburg, Rosebank dia ho tonga ary hanaitra ny indostrian'ny fandraisam-bahiny ao amin'ny tanàna lehibe indrindra any Afrika Atsimo.
Ny trano fandraisam-bahiny dia hipetraka ao amin'ny Oxford Parks, faritra mifangaro mifangaro misy ny birao premium, trano sy mpivarotra antsinjarany sy trano fisakafoanana, izay hita ao anatin'ny tontolom-bahoaka miavaka sy mitantana ary azo aleha manokana.
Ilay efitrano vaovao Radisson RED Hotel Johannesburg, Rosebank, misy trano 222, dia ahitana studio sy suite mahazatra amin'ny endriny feno fahasahiana. Ny hotely dia hanasongadinana ny foto-kevitra momba ny sakafo sy zava-pisotro Radisson RED malaza ary ny sehatra ara-tsosialy, toy ny 'fisakafoanana tontolo andro' Oui Bar & Ktchn. Manaraka ny dian'ny hotely rahavaviny any Cape Town, nifidy ny bara tafo tsara indrindra tao an-tanàna, Radisson RED Johannesburg, Rosebank dia hirehareha ihany koa bara tafo sy terrasma. Ny tafo tampon-trano koa dia ahitana dobo filomanosana sy efitrano fanaovana fanatanjahan-tena, hanome safidy maro ho an'ny vahiny hiala sasatra, mandritra ny filentehany ao amin'ny fijerin'ny lanitra Johannesburg.
Radisson Hotel La Baie d'Alger any Algiers no trano fandraisam-bahiny faharoa an'ny vondrona any Algeria ary hotely misy marika Radisson voalohany ao amin'ny firenena.
Ny trano fandraisam-bahiny vaovao dia kasaina hisokatra amin'ny 2022, ao amin'ny distrikan'i El Hamma no misy azy. Midika izany fa ho mora tratrarina amin'ireo toerana fialamboly malaza toy ny Botanical Garden of El Hamma, the Martyr's Memory and the Bardo National Museum of Prehistory and Ethnography. Manakaiky ny seranan-tsambon'i Alger koa, seranan-tsambo manan-tantara any Alzeria ho an'ny fifanakalozana varotra an-dranomasina.
Ny trano fandraisam-bahiny misy efi-trano misy 184 - ahitana efitrano mahazatra, efitrano kely ary efitrano fidiovana - dia hanome ny tena traikefa Radisson amin'ny alàlan'ny famelana ny vahiny hahatsiaro tena milamina ao anatin'ny toerana mampitony. Ny vahiny dia afaka misakafo ao an-toerana sy any an-toerana amin'ny sakafo fisakafoanana amin'ny andro fisakafoanana mandritra ny tontolo andro ary mankafy sakafo maivana sy zava-pisotro mamelombelona ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Ny fivoriana 308 sqm ao amin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny habaka misy ny hetsika dia ahitana efitrano fivoriana dimy manara-penitra sy toerana fihaonambe iray. Ireo fialam-boly fialam-boly dia hisy koa gym sy spa spa fitaovana feno.
Portfolio misy hotely telo eto Madagascar:
The Radisson Blu Hotel Antananarivo Waterfront ary ny Radisson Hotel Antananarivo Waterfront dia apetraka amin'ny toerana afovoany amin'ny sampanan-dalana eo afovoan-tanàna ao amin'ny distrikan'ny asa aman-draharaha sy ny varotra. Miaraka amin'ny vavahady fidirana telo, ireo hotely dia hanana fidirana tsy manam-paharoa mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Antananarivo, 30 minitra latsaka. Any amin'ny Waterfront, fitambarana mangina izay azo antoka (rafitra CCTV misy olona 24 ora) ary voahodidin'ny farihy lehibe sy toeram-pivarotana marobe, toy ny trano fisakafoanana, magazay, ary sinema.
Ny fananana fahatelo, Radisson Serviced Apartments Antananarivo City Center, dia miorina amin'ny faritra marefo ao afovoan-tanàna, voahodidin'ny bar, trano fisakafoanana ary koa banky lehibe, ministera ary ny lapan'ny filoham-pirenena taloha.
Ity fampahalalana ity dia nozaraina tao amin'ny Africa Hotel Investment Forum (AHIF) nitranga 23-25 ​​septambra 2019 - Sheraton Addis, Etiopia.
Fa maninona no tsy niasa i Thomas Cook Travel?